Enzanisa ne iPhone yako nemadingindira uye mapakeji ezviratidzo [VIDEO] | IPhone nhau
Enzanisa ne iPhone yako netiemaiti uye mapakeji ezviratidzo [VIDEO]
Iyo "boom" ye iPhone kugadzirisa pamwe nekuuya kweIOS 14 inoita kunge yakaparara zvishoma, zvisinei, hapana imwe yedzakambotangwa nzira inogutsa nhengo dze iPhone News. Ndokusaka tisina kuzorora kusvikira tawana iyo chaiyo nzira yekuita yako iPhone.
Nedzidziso iyi tinokuratidza maitiro ekuisa icon mapake uye madingindira ekugadzirisa zvizere iPhone yako, iite yakasarudzika. Iyi ndiyo nzira yepakutanga uye yakakosha kuitira kuti yako iPhone haina kufanana neyevamwe, haugone kufungidzira kusvika papi.
Kuti unyatsogadzirisa yako iPhone, chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuita kurodha pasi «Moloko» application, isina kureruka uye zvachose yemahara application yaunogona kutenga muIOS App Store paIYI LINK. Kana tango tora pasi uye nekumuisa, chinhu chiri nyore chinouya:
Vhura iyo Moloko app uye utarise iwo maitoni ezviratidzo aunonyanya kufarira. Dhinda bhatani "Tora" kuvhura iyo tabo yemusoro wenyaya iwoyo.
Iyo ichatiratidza iyo icon pack yezvizvarwa zvekushandisa uye chechitatu-bato kunyorera. Kutanga sarudza zvemuno zvinoshandiswa uye tinya "Dhawunirodha".
Safari ichavhura uye kutizivisa kuti tiri kuenda kunotora "Mbiri". Dzvanya pane bhatani "Bvumidza" uye enderera kurodha pasi.
Isu tinobuda Safari uye tiende kune "Zvirongwa" kunyorera. Pamusoro ichataridza kuti tatorodha pasi nhoroondo, saka tinopinda uye tinya gadza
Isu tinodzokorora chiito pamwe neye icon pack yechitatu-bato kunyorera
Iye zvino tichaona maratidziro anozoita mifananidzo chaiyo mumenyu yekutanga ye iPhone yedu. Izvo zvinoenderana nezvikumbiro zvatisina kuisa hazvishande, saka tinogona kuzvibvisa Nenzira yakapusa. Mifananidzo inoenderana nemaapplication akaisirwa anozoivhura nekukurumidza. Izvo hazvigone kuve nyore uye yako iPhone yakasarudzika zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Enzanisa ne iPhone yako netiemaiti uye mapakeji ezviratidzo [VIDEO]
Uye ndinoibvisa sei kana ndisingade iyo yakawanda? Nekuti iyo App inosiya asi maapplication anoramba ari parunhare
Delete iyo mbiri uye zvese zvinobviswa.
Zvirongwa / general / profiles
Tendera nhoroondo? Uye mahara? Kwete dambe ...
hazvichinje, zvinoteedzera uye une 93889237382298374 mifananidzo pachiratidziri ...
Pindura kune salva
Apple inotenga kodzero ku'Velvet Underground 'zvinyorwa
Ko Apple Inonyatso Chengeta Yayo Green Green Vimbiso?